रार्इहरु लिम्वु भएकोमा स्वागतयोग्य तथा केही प्रसंगहरु | मेरो लिम्बुवान
रार्इहरु लिम्वु भएकोमा स्वागतयोग्य तथा केही प्रसंगहरु
दिल पालुङवा लिम्वु (नेपाल कुश्शा)
भरखरैको सनसनीपूर्ण समाचार संखुवासभाका रार्इहरु लिम्वुमा प्रवेश भन्ने कान्तीपुर लगायतको संचार माध्यमहरुले समाचार छापेपछि निकै खैलावैला मच्चिएको छ । कसैले यो राजनैतिक षडयन्त्र भने कसैले के, कसैले के भनेर साध्य छैन । आधिकारिक कुरा के हो त्यतापटिट हाम्रो मान्छेहरुको ध्यान किन हो जादैन । यसै कुरालाई केही स्वागतयोग्य मान्दै यहां केही खुराकहरु प्रदान गर्न यो लेख लेखिएको प्रसंग जानकारी गराउदछु । वास्तवमा रार्इ कसलाई मान्ने ? किनकी यो एउटा पदवी हो । सत्रौं शताव्दीतिर अहिलेका लिम्वु भनिनेहरु सवैलाई रार्इ वा राय भनिन्थ्यो । यो कलमीको पूर्खाहरु वि.सं.१८३१ अगाडिकाहरुमा ताङशोवा राय, साम्याङफुङ राय, युम्मीमा राय, युफत्ता राय ­(­पृथ्वीनारायण समकालिन)थिए । त्यस्तै अन्य लिम्वुहरुको थिए । त्यो वेला लिम्वुहरुको नामहरु लिम्वु भाषमा थिए । पृथ्वी नारायणको पालामा लिम्वुवानमा सुव्वाले ठाउ पायो । रार्इ र सुव्वाको समान अर्थ राजा भन्ने हुन्थ्यो । तर किन लिम्वु भनिनेहरुले रार्इलाई त्यागेर सुव्वा भन्न रुचाए । त्यतापटिट पनि वुझन आवश्यक छ । पृथ्वी नारायणले लिम्वुहरुलाई लिम्वुवानसंग सम्झौता गर्नु अगाडिदेखिनै सुवा भन्थे । सुवाहरु राजानै हुन् भन्थे । तर यो राजाको समानार्थी सुवामा पनि विग्रह आयो । यस शव्दलाई राणाकाल वि.सं.१९२५ मा आएर ६० मुरी धान हुने खेत र रु.३० सरकारलाई चढाई सुव्वा दर्ता हुने चलन चलाए । त्यसवेला त्यो सुव्वा कर्मचारी जस्तो भयो । तर पावरफूल थियो । उसले अन्य जातिकालाई रैती राख्न पाउथ्यो । कर उठाएर केही आफैले राखि तोकिएको प्रतिशत राणाहरुलाई वुझाउथ्यो । राणाहरुको जस्तै स्वभाव सुव्वामा थियो । त्यस्तै र्राई सुव्वा हुने नियम वि.सं.१९३५ देखि चलाईयो । यसलाई रार्इगीरी भनिन्थ्यो । यसको लागि सरकारलाई ३० मुरी हुने माटो र रु.१५ चढाउनुपथ्र्यो । यद्धपी यो कलमीको पूर्खा भर्तमान भन्ने पनि वि.सं.१८९१ देखि रार्इ गीरी सुव्वा भएको थियो । उहांको छोरा धनदलले ६० मुरी जेथा पुरयाएर सुव्वा भएको थियो । यही रोलक्रम जेठा सन्तानमा र्सर्दै गएर वि.सं.२०४५ सालतिर प्रेम वहादुर पालुङवा अन्तिम सुव्वा भएका थिए । त्यतिवेला पनि सामान्य त सुव्वा र रार्इगीरी सुव्वा हुने चलन लिम्वु जातिभित्र थियो । रार्इगीरी सुव्वा पक्का सुव्वाभन्दा निम्न कोटीको सुव्वा हुन्थ्यो । त्यस्तै लिम्वुहरुलाई रैतीले राजा मानेर सुव्वा साहव, सुव्वा राजा भन्थे । उनीहरुलाई राणा भन्दा सुव्वासंग डर हुन्थ्यो । किनकी उनीहरुको गांसवास सुव्वाको मुखमा भर पथ्र्यो । यसरी सुव्वा र रार्इमा यही ठूलो सानोको विभेदले हुन सक्छ लिम्वुहरु र्राई नभएर लिम्वुनै भए । सुव्वानै भए । यसैको प्रभाव अहिले पनि धेरै लिम्वुहरु लिम्वु वा थर नलेखेर सुव्वा लेख्छन् । अझ देश वाहिर जानेहरु सुव्वा भनेर सम्वोधन गराउन चाहान्छन् । थर लेख्ने चलन पछिवाट मात्र चलेको हो । खम्वुवानकोलाई सुव्वा वनाउने चलन थिएन । रार्इको पनि आफ्नो क्षेत्रमा उतीकै अधिकार हुन्थ्यो । तसर्थ रार्इ लेखिने समुहमा वस्ने लिम्वुहरुले पनि रार्इको प्रयोग गर्न थाले । अव नागरिकता निकाल्ने वेला भयो के गर्ने भन्दा श्रेस्तावाटनै र्राई भएकोले कतिपय लिम्वुहरु रार्इ भनिन वाध्य भए । यही मध्येका एक समुह हुन भर्खरै संखुवासभावाट रार्इ थर परित्याग गरी आफ्नो पूर्खाको थर वनेम लिम्वु हुनेहरु । प्रसंगवस यहा एउटा कुरा मिसाउन मलाई मन लाग्यो । मैले मेरो पुस्तक किरात लाजे लिम्वुवान सामान्य ज्ञानमा रार्इ वनेमको कुरा गरेको थिए । तर त्यो थाहा नहुने वनेम दाजुभाईहरुले मेरो कुराको असहमती जनाए । तव मैले भने तपाईहरुको दाजुभाईहरु एकजना वनेम लिम्वु भएर वसिरहेको र अर्को चाही रार्इ भएर वसेको छ । जातिय या थरीय कुरा मिलाउनुस भनेको थिए । लामो समय पछि यो र्सार्थक भएर आएको छ । त्यस्तै केही नेम्वाङ र मेन्याङवोहरु लगायतकाहरु पनि रार्इ नामधारी भएको कतै कतै पाईएको छ । नेम्वाङ र योङयाङको केही हांगोहरु धिमालभित्र प्रवेश भएको पाईन्छ । त्यस्तै लेप्चाभित्र पनि । यीनीहरु समाजशास्त्रीय र मानवशाश्त्रीय अनुसन्धानको विषयवस्तुहरु हुन् । संखुवासभावाट अझै यस्ता धेरै रार्इहरु लिम्वु हुन सक्ने देखिन्छ । यी भए लिम्वु भित्रकै कुरा । अव अर्को प्रसंग, यहा लिम्वुहरुले सधै लिम्वुकै रुपमा हेर्ने आठपहरिया रार्इ, याख्खा, देवान, मेवाहाङ र लोहरुङ पनि छन् । उनीहरु लिम्वु भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई के अप्ठेरो छ । त्यो उनीहरु भित्रको कुरा हो । तर लिम्वुले हेर्ने दृष्टिकोणचाही उनीहरु लिम्वुनै हुन् । उनीहरु र लिम्वुविच सरावरी विहेवारी चल्छ । चलन उस्तै उस्तै छ । हुनत अहिले लिम्वु मानिनेहरुमा पनि केही फरकता त अवश्य छ । जय कुमार थक्लुङ लिम्वुको अनुसार थक्लुङ लिम्वु र मादीतिरका देवान मझिया,याख्खाहरुसंग सरावर विहेवारी पुस्तौ पुस्तादेखि चलिआएको हो । त्यस्तै धनकुटा त्रिसुलेका ज्ञान वहादुर खेवा लिम्वुको अनुसार अठप्रे र उनीहरुविच पुस्तौ पुस्तादेखि विहेवारी चलिआएको छ । धनकुटा चौविसको पदम चेम्जोङको अनुसार त्यो क्षेत्रमा उनीहरु र देवान याख्खाहरु विच पुस्तौ पुस्तादेखि विहेवारी चलिरहेको छ । यो कुरा गायक भगत सुव्वा पनि स्वीकार्नु हुन्छ । त्यो क्षेत्रका लिम्वु थरीहरुले माथिल्लो कक्षका लिम्वुहरु भन्दा याख्खा देवान, आठपहरिया, लहरुङ मेवाहाङसंग विहेवारी वढी गर्ने गर्छन् । भगत सुव्वाकै कथन अनुसार फेदापहाङका सन्तानहरु पहिले पहिले विवाह गर्दा पहिलो प्राथमिकता याख्खाहरुसंग हुन्थ्यो । त्यसपछि मात्र अन्यथरी लिम्वुसंग हुन्थ्योरे । हुनपनि लिम्वुहरुको विहावारीको चलन आफ्नो नजिकको मिल्ने समुहसंग मात्र विहेवारी तत्कालिन समयमा चल्थेछ । जस्तै मावोहाङ समुहको मावोहाङ समुहसंग । पापोहाङको पापोहाङसंग । फागोहाङको फागोहाङसंग । लिम्वुहरुमा यस्ता केही समुहहरु छन् । यीनीहरुमा खेवाहाङ, थेगीमहाङ, नेम्वाङहाङ, खोक्याहाङ, साम्वाहाङ, सेरिङहाङ, फेदापहाङ, खजुमहाङ आदि । यही समुहमध्ये याक्खाहाङ(यख्खोवा)र छोन्देनहाङ(आठपहरिया) हरु पनि लिम्वुहरुले आफ्नो समुह मान्ने गरेका छन् । यी समुहहरु कतिपयले हामी लिम्वु हौं भन्छन् भने कतिपयले रार्इ हौं भन्छन् । उनीहरुमा जातिय पहिचानको समस्या छ । यी समुहहरु र लिम्वुको थरहरु प्रायश मिल्ने गर्छ । जस्तै आठपहरे रार्इमा तुम्वा थर हुन्छ लिम्वुमा पनि तुम्वा थर हुन्छ । लिम्वु लिङथेप, याख्खा रार्इ लिङथेप हुन्छ । त्यस्तै अन्य समुहहरुसंग पनि थर मिल्ने गर्छ । तर अरुण पारीको खम्वुरार्इहरुसंग मिल्दैन । त्यसैले पाठकहरुले पनि यो कुरा छुटयाउन सक्नुहुनेछ यीनीहरु लिम्वु हुन् कि रार्इ ? यदी उनीहरु लिम्वु नहुदो होत किन विहेवारी यती प्रगाढसंग हुन्थ्यो । त्यसैले सवैले यी कुराहरु मनन गर्नैपर्ने हुन्छ । अरुण पारीको खम्वुरार्इ र सुनुवारसंग पनि विहेवारी चल्छ । तर व्यापकता र सहजता त्यती छैन । यी वाहेक इमेहाङ लिम्वुको सन्तानहरु लेप्चा भएको लिम्वु इतिहासले वताउछ । उनीहरु वुद्धमार्गी भएकोले यो कुरा भएको वताईन्छ । यीनीहरु मुनाहाङको सन्तानहरु हुन् । यीनीहरु लासाहाङ-मावोहाङवंशीहरुको सगोत्री हुन् । तिव्वतमा एक पटक दख्खल गरेका वंशहरु हुन् । कुमार सुव्वा झापाको अनुसार राजवंशी र धीमालले उनीहरु लिम्वुको भाई भएको स्वीकार्छन । धीमाललाईत मधेसका लिम्वुनै भनिन्छ । हुनत लिम्वुपूर्खा एक हांगो कोचुहाङ जसले लिम्वुवानको तराईप्रदेश तथा आसामक्षेत्रमा शासन गरेका थिए -का सन्तानहरु भनेर राजवंशी मेचे कोचेलाई लिम्वु इतिहासले पनि वताएको पाईन्छ । शेर्पाहरु र लिम्वुहरुमा पनि जातिय सामीप्यता देखिन्छ । धर्मको कारणले फरकता भएको देखिन्छ । संखुवासभा हेदाङनाका र्राईहरु पनि लासाहाङको नजिक हुनसक्ने देखिन्छ । अवको प्रसंग माथि उल्लेखित जातिहरुले आआफ्नो पहिचान कसरी गर्ने हो सोच्नै पर्ने वेला आएको छ । यो कुरा वर्तमान पुस्ताले वुझनु पर्ने हुन्छ । यहा एउटा विडम्वनाको कुरा के छ भने माथि उल्लेखित समुहहरुको वृद्धहरु लिम्वु हौं भन्छन् भने अहिलेका पुस्ताहरु रार्इ हौं भन्छन् भने कतिपय छुट्टै समुह हौं भन्छन् । समय आएको छ । अवत यो समुहमा पनि धेरै शिक्षित समुहहरु उत्पादन भैरहेका छन् । समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको अध्येताहरु पनि छन् । उनीहरुले भविष्यमा पनि अप्ठेरो नआउने हिसावले आफ्नो जातिय पहिचान गराउने समय आएको छ । यसको लागि व्यापक छलफल गरेर निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सेवारो ।
Comment by Dilip on March 21, 2010 6:05 am
अहीलेको भाषिक तथा जातीय द्वन्दको बिजरोपण भैरहेको यस्तो आजको बर्तमान अन्योल परिस्थितिमा सहज र स्पस्टसँग तपाईंको माथिको लेखले हाम्रो सम्बेदनशील (लिम्बु र राइ) समाजमा अकस्मात उब्जिएको धेरै जटिल प्रश्नहरुको पूर्ण रुपमा जवाफ मिल्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ।यस्तै तपाइजस्तै हरेक लिम्बुहरुको कलमले यस्तै रोचक र ज्ञानमुलक लेखहरुको बिस्तार गर्दै जवोस। तपाइका अद्भुत पाइलाहरु नरोकिउन …keep it up
Comment by deepak wanem limbu on September 7, 2010 5:10 pm
“rai or raraie”yo clear garai dinu vae ajha bujhna sajilo hunthyo,kinavane hamro npp ma rai chha kina rai lekhiechha ta “rarai” thauma” rai” dhanyabad
Comment by nuba on November 19, 2010 12:53 pm
yo ek parkarko ramro lekh ko thanks
estai khoj mulak lekhharu lekhnu hola
Comment by vishal thebe on July 29, 2012 12:24 pm
ramroo lekh…limbu ra rai ma sadiyou dekhi bhaichara cha..ra yeslaii ajha badhauna jaruri cha…hami ek bhayera jiuna jaruri cha
‘भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ’ नारायणहिटी दरबारभित्र का केही दृश्यहरु